” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် အပိုင်း – ( ၁၂ ) ) – Na Pann San
Na Pann San W | March 24, 2020 | Knowledge | No Comments
” လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာသော မနှင်းဆီ ( ခ ) ကရင်မ ဒဏ္ဍာရီ ”
“ ၃ တိုက် မှာ မိန်းမ တစ်ယောက် မြင်လိုက် ရတယ် ”
၁ ၉ ၈ ၉ ခုနှစ် ၊ ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည် မရောက်ခင် အထက်ပါ သတင်း စကားဟာ တစ်ထောင်လုံး ကိုပျံ့နှံ သွားပါတယ်။ ဆိုးပေ့မိုက်ပေ့ဆိုတဲ့ မတစ်ထောင်သား၊ ယောက်ျားတွေချည်းနေ တဲ့ ထောင်မှာ မိန်းမတစ် ယောက်တွေ့လိုက် ရတယ် ဆိုတာ တိုက်ဝင်း မှာတော့ အထူးအဆန်း ပါပဲ။ ညဖက် အိပ်မပျော်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ယောက် စတွေ့ လိုက်တာက စတဲ့ ဇာတ်လမ်း ပါပဲ ။
ဒီသတင်းဟာ ထောင်အတွင်းကို တောမီးပမာ ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ တိုက်တစ်တိုက် နဲ့ တစ်တိုက် ဆက်သွယ် လို့မရအောင် အုတ် တံတိုင်းတွေ၊ သံဆန်ခါတွေ အမျိုးမျိုးကန့်သတ် ထားပေမယ့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ ဘောက်ဆင်းတွေ၊ မိလ္လာသမားတွေ၊ ထမင်းဘုတ်ကိုင်တွေက တစ်ဆင့် ဒီသတင်းဟာ အင်းစိန်ထောင်ဝင်း အတွင်း ပျံ့နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကြောင့် တိုက်ထောင်မှူး ကြီး မောင်ပြုံးက စတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကို ခေါ်စစ်ပါတယ်။
” လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာသော မနှင်းဆီ ( ခ ) ကရင်မ ဒဏ္ဍာရီ “
သူကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဒလရဲစခန်း ဝင်ရောက် စီးနင်းမှုမှာပါတယ် ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဝင်းရွှေဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းရွှေ ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါ သူက ညဖက် ရေထသောက် တဲ့အချိန် ညသန်းခေါင်လောက် ၃ တိုက် ရှေ့မှာ လက်နောက် ပစ်ပြီး လမ်းလျှောက် နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ် ယောက်ကို သေချာမြင်လိုက်ရတယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြော ပါတယ်။
ထောင်မှူးကြီး က ကောလာဟလ သတင်း ထုတ် လွှင့်ပြီး ထောင်ဆူပူမှုဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်သလားဆိုတဲ့ သံသယ နဲ့ စစ်ဆေးပေမယ့် တစ္ဆေသရဲ အယုံအကြည်မရှိတဲ့ ဝင်းရွှေက တိတိကျကျပြောနေတဲ့ အတွက် သူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သွားပါတယ်။ဒီသတင်း ရုတ်ချည်းပျံ့နှံ့သွား ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ထောင် သမ္ဘာတွေရဲ့ မှတ်ချက်နဲ့အတူ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေလည်း ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ် လာပါတယ်။ဒီဒဏ္ဍာရီအမျိုးမျိုးထဲက တစ် ထောင်လုံးလက်ခံလိုက်တဲ့ ဇာတ် လမ်းကတော့ ၃ တိုက်မှာ တွေ့ လိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးဟာ မနှင်းဆီ (ခ) ကရင်မ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြစ် ရပ်မတိုင်ခင် ၁ ဆောင်မှာ ထူးခြား တဲ့ အဖြစ်အပျက်နှစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါ သေးတယ်။ ပထမအဖြစ်အပျက် ကတော့ အရေးအခင်းမှာ ပြည်သူ တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလာတဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ သေနတ်တွေကို သရက်တော ကျောင်းတိုက်အတွင်း မှာ သိမ်းဆည်း ထိန်းသိမ်းပေးခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ထောင်ခုနစ်နှစ် ချမှတ်ခံရတဲ့ ရန်ကုန်တက်္ကသိုလ် ရုက္ခဗေဒကျောင်းသား မင်းလွင် ကြုံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။မင်းလွင် ဟာ အင်းစိန်ထောင် ၁ ဆောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံ ထားရတာဖြစ်ပြီး သူနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အောင်လွင်၊ စံဇာဏီဘို၊ နောင်ရိုး တင်ဝင်း၊ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တင်ဆန်း (ရကသ)၊ ပြုံးချို (ရကသ)၊ မင်းဇေယျ (မကသ)၊ ယဉ်ထွေး (လူ့ ဘောင်သစ်)၊ တင်အေး၊ BBC နေမင်း၊ ဦးတိုက်မောင်း စသဖြင့် ရှိကြပါတယ်။
မင်းလွင်ကတော့ ၁ ဆောင် အစွန်ဆုံးအခန်းမှာ နေရပြီး အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် တံခါးနှစ်ထ ပ်ရှိပေမယ့် တိုက်အရှေ့က ဝင်းတံခါးကိုတော့ သော့ခတ် မထားဘဲ ဖွင့်ပေးထားပါ တယ်။
သူ့မှာ ပဲခူးအချုပ် ကပါလာ တဲ့ ဆေးလိပ် ထုပ်ပါလာပါတယ်။ ထောင်ဗူးဝက မီးခြစ်သိမ်းထား လိုက်တယ်။
မင်းလွင်က ဆေးလိပ် အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် အခန်းသံတိုင်ကို ကိုင်ပြီး တိုက် ရှေ့က ဖြတ်သွားသမျှ ဝန်ထမ်း တွေ၊ ဘောက်ဆင်းတွေ ဆီက ဆေးလိပ်မီး တောင်းလေ့ရှိတယ်။အချို့ကလည်း သနားတော့ သူ့ကို သောက်လက်စ ဆေးပေါ့လိပ်လေး တွေနဲ့ မီးပေးသွားလေ့ရှိပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက မီးတို့ ရတဲ့ကိစ္စပဲ။အကျဉ်းသားတွေက အရေးအခင်းမှာ ထောင်ကို မီးရှို့ တဲ့အတွက် နှစ်ထပ်ဆောင်တွေ အတော်များများ မီး လောင်ပျက် စီးသွားတယ်။ အဲဒီကတည်းက အကျဉ်းသားတွေကို မီးခြစ် ကိုင်ဆောင်ခွင့် မပေးတော့ပါဘူး။ ဒါ ကြောင့် ညဘက်ဆိုရင် ကင်းစောင့်တဲ့ဝါဒါတွေဆီက ဆေးလိပ် မီးတောင်းရလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ညမှာတော့ မင်းလွင်က ဆေးလိပ် အရမ်းသောက်ချင်နေ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ကင်းသမားမှ တိုက်ရှေ့ကို တော်တော်နဲ့ရောက် မလာဘူး။
ဒီတော့ ဆေးပေါ့လိပ် အတိုကိုင်ပြီး ကင်းသမားကိုမျှော် ရင်း သူတစ်ချက် အိပ်ငိုက်သွား တယ်။ ရုတ်တရက် သူ့အခန်းရှေ့ မှာ ခြေသံကြားတော့ အိပ်ချင်မူး တူးနဲ့ လှမ်းအော်လိုက်တယ်။
“ ဆရာရေ ဆေးလိပ်မီးတစ် တို့လောက်”
သူ့စကား ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ အခန်းရှေ့ကို လူတစ်ယောက်လာ ရပ်တယ်။ သံတိုင် ကြားကနေပြီး သူ့ကို ဆေးလိပ်မီး လှမ်းပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း ဆေးလိပ်သောက် ချင်ဇောနဲ့ လူ ကို မကြည့်မိဘဲ ဆေးလိပ်မီးကို အလောတကြီး ညှိလိုက်တယ်။သူ့ဆေးလိပ်ကို ပြန်ပေးလိုက်ရော အဲဒီလူက ဘာမှမပြောဘဲ ပြန်ထွက်သွား တယ်။ ဒီလူ့ရဲ့လက်က အရှည်ကြီး ဆိုတာတော့ သတိ ထားမိတယ်။မင်းလွင်လည်း ဆေးလိပ်မီးလေးရတုန်း အရသာ ခံပြီး အားပါးတရဖွာနေတုန်းမှာ သူ့တိုက်ခန်းရှေ့ဝင်းတံခါးအဝမှာ ညတာဝန် ကျဝန်ထမ်း ပေါ်လာ တယ်။
“ ဟေ့ အကျဉ်းသား ညဘက် အချိန်မတော် ဘာလို့ ဆေးလိပ် သောက်နေတာလဲကွ”
သူ့စကားဆုံးတဲ့ အခါ မင်းလွင်လည်း နဝေတိမ်တောင်ဖြစ် သွားတယ်။ သူထင်တာက ဆေးလိပ်မီးကို ည တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းပဲ စေတနာဗရပွ နဲ့ လာပေးတာလို့ ထင်နေတုန်းပါ။ ဒါကြောင့် သူက ပြန်ရှင်းပြလိုက် တယ်။
“ ဆရာပဲ ဆေးလိပ်မီးလာပေးလို့ သောက်နေတာလေ”
သူ့စကား ဆုံးဆုံးချင်း ဝန်ထမ်းက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ သံ တိုင်တံခါးဝအထိ လျှောက်လာ တယ်။
“ ဟေ့ကောင် လျှောက်ပြော မနေနဲ့။ ငါဒီတိုက်မှာ ဘယ်သူ့ကို မှ ဆေးလိပ်မီး မပေးသေးဘူး ကွ”
မင်းလွင်ကလည်း မခံဘူး။ သူ့ကို ဆေးလိပ်မီးပေးခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ခံပြောတယ်။
“ ခင်ဗျား မပေးဘဲ ဒီမီးကို ဘယ်ကတို့ရမလဲဗျ”
ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် ညတာဝန် ကျဝန်ထမ်းက ထောင်မှူးကြီးဆီ ကို ထူးခြားဖြစ်စဉ် အဖြစ် အစီ ရင်ခံတင်ပြပါ တယ်။ နောက် တစ် နေ့မှာ ထောင်မှူးကြီး မောင်ပြုံးက တိုက်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ညဝန်ထမ်း တွေကို ခေါ်ယူစစ် ဆေးပါ တယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါ ဘယ်သူကမှ မင်းလွင်ဆီကိုသွားပြီး ဆေးလိပ်မီး မပေးကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ တယ်။ မင်းလွင်ကို စစ်ပြီး ဝန်ထမ်း တွေကို ခေါ်ပြတဲ့အခါမှာလည်း ဆေးလိပ်မီး ပေးတဲ့သူရဲ့ မျက်နှာ ကို မကြည့်ခဲ့ တာကြောင့် ဘာမှ မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒုတိယ အဖြစ်အပျက်က တော့ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦး အောင်လွင်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ၁ ဆောင်မှာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တွေထဲမှာ ထောင်ကျပြီး သားတွေရော၊ ပုဒ်မ ၁၀ (က) နဲ့ ထိန်းသိမ်းထား သူတွေ ရော ရှိနေပါတယ်။ဦးအောင်လွင် ရဲ့ အခန်းထဲမှာ နောင်ရိုးတင်ဝင်း (မာလာ တင်ဝင်း) နဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တင်ဆန်းတို့ ရှိပါ တယ်။ အဲဒီအချိန်က ရှစ်လေးလုံး တစ်နှစ်ပြည့် လုပြည့်ခင်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဟာ အတွေး အခေါ်အယူအဆ အားကောင်း သူတွေဖြစ်ပြီး တချို့ဟာ နိုင်ငံ ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ထဲက အများစုဟာ ထောင် ထဲက ပါးစပ်ပြောဒဏ္ဍာရီတွေကို လည်း ယုံကြည်သူတွေ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် မင်းလွင်ကို ဘယ် သူမှန်းမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဆေးလိပ်မီး ပေးခဲ့တာကိုလည်း ဟာသလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ညတစ်ညမှာတော့ သူတို့ ရဲ့ ယုတ်္တိဗေဒတွေးခေါ်စဉ်းစား မှုကို စိန်ခေါ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ည သန်းခေါင်ကျော် အချိန်ကြီး ၁ ဆောင်မှာ အသံနက်ကြီးနဲ့ အော်သံ တစ်ခု ကြားလိုက်ရတာက စပါ တယ်… ။
စတင်အော်တဲ့ သူကတော့ BBC ဦးနေမင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနေမင်းရဲ့ အော်သံဟာ ဘေး အခန်းတွေကို ကူးစက်သွားပြီး အဲဒီအခန်းက လူတွေကလည်း ဆက်အော်ပါတယ်။ ဒီလိုအော်တဲ့ အချိန်မှာ ဦးအောင်လွင်က ပရိတ် ကြီး ၁၁ သုတ်ကို ရွတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူ့ ဘေးမှာအိပ်နေတဲ့ နောင်ရိုးတင် ဝင်း နဲ့ ကိုတင်ဆန်းက ထအော် ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နောင်ရိုးတင်ဝင်းက အိပ်ချင်မူး တူးနဲ့ အပြင်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး “ ဝင်လာပြီ ဝင်လာပြီ ဖြူဖြူ အကောင်ကြီး ဝင်လာပြီ” ဆိုပြီး အော်ပါတော့တယ်။
ဦးအောင်လွင်က နှစ်ယောက်လုံးကို အိပ် ရာကနိုးအောင် ညဘက် ပရိတ် ရွတ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ ရေခွက်ထဲ က ပရိတ်ရေနဲ့ လှမ်းပက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတို့က နတ်ပူးသလို တုန်ယင်နေပြီး ပါးစပ်ကလည်း ဆက်အော်နေကြတယ်။ လှမ်းသတိပေးလို့ မရတော့တဲ့အဆုံး ဦးအောင်လွင်က သူတို့နှစ်ယောက် ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လက်သီးနဲ့ထိုး လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကလည်း တစ်ဆက်တည်း အော်လိုက်တယ်။
“ သွားကြ မင်းတို့ထွက်သွား ကြ ငါတို့ကိုဘာမှ အန္တရာယ်မပေး နဲ့”
ဦးအောင်လွင်ရဲ့ လက်သီး ချက်ဒဏ် ခံလိုက်ရလို့လားမသိ ဘူး။ နောင်ရိုးတင်ဝင်းလည်း အော်သံ တိတ် သွားတယ်။ ကိုတင် ဆန်းလည်း သတိပြန်လည်လာ တယ်။ အဲဒီညက ၁ ဆောင်မှာ သရဲစီးတယ်ဆိုပြီး တိုက်ဝင်း တစ်ခုလုံး သတင်းပျံ့နှံ့သွားတယ်။၁ ဆောင်မှာ ရှိတဲ့သူတွေကလည်း တကယ် ကြုံတွေ့လိုက်ရတာ ကြောင့် ဒီဖြစ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး မှတ်ချက် ပေးတာတွေ မလုပ်ကြ တော့ဘူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ် သက်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး ကြာမှ ဦးအောင်လွင်က အခုလို ပြန်ပြောပြတယ်။
“ တကယ်တော့ ၁ဆောင်က တိုက်ဝင်းထဲမှာ အစွန်ကျတယ်။ ဒီတော့ လူသွား လူလာလည်း နည်း တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပရလောကသား တွေရဲ့ အရိပ်အယောင် တစ်ခါ မှ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ အဲဒီတစ်ညပဲ ကမ္ဘာပျက်သလို ဆူညံသွားခဲ့တာ။
နောက်တော့ ဒါဘာလို့ဖြစ် တာလဲဆိုပြီး စုံစမ်းကြည့်လိုက် တော့ ၁၉၈၈ ခု၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က အင်းစိန်ထောင်မှာ ထောင်ဆူပူမှု ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သိခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဆူပူမှုမှာလည်း လူတွေ၊ ထောင်သားတွေ အတော် သေခဲ့တယ်။၁ ဆောင်မှာ ပိတ်မိ နေတဲ့သူတွေကလည်း စားစရာ မရှိတော့လို့ ခွေးတွေကြောင်တွေကိုပါ သတ်စားရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ ဒီလူတွေ လည်း သေကုန်ကြတာပါပဲ။ ကျွန်တော် သိရသလောက် ရှော်ဖီရဲ့ အမှုတွဲတွေလောက်ပဲ အသက်ရှင် ခဲ့တယ်”
ဦးအောင်လွင်ရဲ့ မှတ်ချက် ကို တိုက်ဝင်းမှာ နေဖူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသား တော်တော်များများက ငြင်းဆန်ခြင်း မပြုကြပါ ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အသိရ ခက်တဲ့ ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့် စုံနေတဲ့ အင်းစိန် ထောင်ကြီးရဲ့ ၃ တိုက်ရှေ့က အမျိုးသမီးတစ် ယောက် လမ်းလျှောက်သွားတာ ကို မဝေဖန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းကို နိဂုံးချုပ် လိုက်တော့ မနှင်းဆီ (ခ) ကရင်မ လို့ အားလုံးက လက်ခံလိုက်တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မကရင်မ ဟာ စိတ်လိုရင် လိုသလို ညဘက် ရောက်ရင် ထောင်ကျအကျဉ်း သားတွေရဲ့အပေါ်ကို ခွတက်ပြီး ကျီစားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း စကားကလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီ လိုမျိုး ညဘက် ကရင်မရဲ့ကျီစား ခြင်းကို ခံရပြီးတဲ့သူတွေဟာ ရှက် ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ မနက်ရောက်ရင် ရေကန်မှာ ပုဆိုးတွေလျှော်၊ အိပ် ရာခင်း တွေလျှော်ပြီး သူငယ်ချင်း တွေက မေးမြန်းတဲ့အခါ “ ညက ကရင်မ တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ” လို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒီလို ပြောတဲ့သူဟာ အမှန်တကယ် ညက ကရင်မနဲ့တွေ့ခဲ့လို့ ပြော တာလား။
သူ့ဘာသာသူ အရှက် ကို ကာကွယ်ဖို့ ပြောတာလား ဆို တာ ဘယ်သူမှ မခွဲခြားနိုင်ပါဘူး။ ထောင်ထဲကို အကြောင်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ကတော့ ဒီလို Ejaculation (တစ်ကိုယ်ရည် ကာမအရသာ ပြီးမြောက်ခြင်း) ဖြစ်စဉ်ဟာ လူ တွေရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် (Body Need) အရ ဖြစ်တတ်ကြောင်းနဲ့ ထောင်ထဲက သရဲမတစ်ယောက် က ဒီလိုမျိုး လာကျီစားတယ်ဆို တာဟာ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်သဖွယ်ဖြစ် နေကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဆေး ပညာ သဘောအရ အသက် အရွယ် ငယ်ရွယ်တဲ့ ယောက်ျား လေးတစ်ယောက်ဟာ တစ်ပတ်ကို လေးကြိမ်လောက် ကာမအာသာ ဖြေဖျောက်ရန် လိုအပ်ပြီး အသက် အရွယ်ကြီးရင့်သူဟာ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ဖြေဖျောက်ဖို့ လိုအပ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကံ ဆိုးမိုးမှောင်ကျမှုအရ ထောင်ထဲ ကို ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသားတွေ ဟာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု မရတော့တဲ့အတွက် ခန္ဓာဗေဒဖြစ်စဉ်အရ လက်ဖြင့် ဖြေဖျောက်ခြင်း (Masturbation) လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် သူ့အလို လို သုက်လျှံခြင်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ အခန်းဖော်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တွေကြား အရှက်မရအောင် ကာ ကွယ်ဖို့ ကရင်မ ဇာတ်လမ်းကို Cover Story လုပ်ကြတယ်လို့ ဝေဖန်ကြပါ တယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၁ ဆောင်ကိုရောက်နေတဲ့ စမ်းချောင်းသားတို့ အုပ်စုကလည်း အရမ်း စိတ်ဝင်စားနေ ပါတယ်။ စမ်းချောင်းသား ကိုယ်တိုင် ၅ တိုက် ၂၂ ခန်းက ပရလောကသားတွေ နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လောလော လတ်လတ် ဇာတ်လမ်းတွေရှိနေ တော့ ၃ တိုက်ရှေ့မှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် တွေ့လိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ ဝင်းရွှေရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ် စဉ်ကို သူက လုံးဝထောက်ခံ လိုက် ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ၁ ဆောင်ကို ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေထဲက ကြည့်မြင်တိုင်သား ညီညီလှိုင်က မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုပြီး ဇွတ်ငြင်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်တွေပြောသလို အရှက် မရအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ လုပ် ကြံပုံပြင်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ၁ ဆောင် ညောင်ပင်အောက်မှာ ငြင်းခုံနေကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ငြင်းခုံပွဲဟာ တဖြည်းဖြည်းအရှိန် မြင့်လာတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေတင် မကတော့ဘူး။ ရိုးရိုး အကျဉ်းသားတွေလည်း ပါ လာတယ်။ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ရင်ဘတ်မှာ အတန်းသုံးတန်းပါတဲ့ တံဆိပ်ထိုး ထားတဲ့ လူတစ်ယောက် ရောက် လာပြီး အားလုံးကိုပြောတယ်။
“ ကရင်မ တကယ်ရှိမရှိ ငြင်း မနေကြပါနဲ့ကွာ။ ငါက အင်းစိန် ထောင်ကို အရေးအခင်းပြီးမှ ရောက်လာတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ အရေးအခင်း မတိုင်ခင်ကတည်း က ဒီထောင်မှာ အကြာကြီး နေလာခဲ့တာ။ ကရင်မဆိုတာ တကယ်ရှိတယ်။
ဘာလို့လဲဆို တော့ ကရင်မ ယောက်ျားဝင်းမြင့် နဲ့ ငါ အကြာကြီးနေ ခဲ့ရတာကွ။ ဝင်းမြင့် ထောင်က လွတ်သွားပေမယ့် ကရင်မကတော့ ဒီထောင် ထဲမှာ မကျွတ်ဘဲ ကျန်နေခဲ့တယ် ဆိုတာ ငါရဲရဲကြီး ပြောရဲတယ်”
အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ သူက တော့ ၁ ဆောင် တန်းစီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လူလိမ်ဝိဇ္ဇာ ကျော်မြင့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။….
(ဆက်လက် ဖော်ပြပေးပါမယ် …….. )
” လကျဆငျ့ကမျး သယျဆောငျလာသော မနှငျးဆီ ( ခ ) ကရငျမ ဒဏ်ဍာရီ ”
“ ၃ တိုကျ မှာ မိနျးမ တဈယောကျ မွငျလိုကျ ရတယျ ”
၁၉၈၉ ခုနှဈ ၊ ရှဈလေးလုံးနှဈပတျလညျ မရောကျခငျ အထကျပါ သတငျး စကားဟာ တဈထောငျလုံး ကိုပြံ့နှံ သှားပါတယျ။ ဆိုးပမေို့ကျပဆေို့တဲ့ မတဈထောငျသား၊ ယောကျြားတှခေညျြးနတေဲ့ ထောငျမှာ မိနျးမတဈ ယောကျတှလေို့ကျ ရတယျ ဆိုတာ တိုကျဝငျး မှာတော့ အထူးအဆနျး ပါပဲ။ ညဖကျ အိပျမပြျောတဲ့ နိုငျငံရေး အကဉျြးသား တဈယောကျ စတှေ့ လိုကျတာက စတဲ့ ဇာတျလမျး ပါပဲ ။
ဒီသတငျးဟာ ထောငျအတှငျးကို တောမီးပမာ ပြံ့နှံ့သှားပါတယျ။ တိုကျတဈတိုကျ နဲ့ တဈတိုကျ ဆကျသှယျ လို့မရအောငျ အုတျ တံတိုငျးတှေ၊ သံဆနျခါတှေ အမြိုးမြိုးကနျ့သတျ ထားပမေယျ့ သနျ့ရှငျးရေး လုပျတဲ့ ဘောကျဆငျးတှေ၊ မိလ်လာသမားတှေ၊ ထမငျးဘုတျကိုငျတှကေ တဈဆငျ့ ဒီသတငျးဟာ အငျးစိနျထောငျဝငျး အတှငျး ပြံ့နှံ့သှားတာဖွဈပါတယျ။
ဒီသတငျးကွောငျ့ တိုကျထောငျမှူး ကွီး မောငျပွုံးက စတှလေို့ကျတယျဆိုတဲ့ နိုငျငံရေးအကဉျြးသား ကို ချေါစဈပါတယျ။
သူကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှဈ၊ ဒလရဲစခနျး ဝငျရောကျ စီးနငျးမှုမှာပါတယျ ဆိုပွီး ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ဝငျးရှဖွေဈပါတယျ။ ဝငျးရှေ ကို စဈဆေးမေးမွနျးတဲ့အခါ သူက ညဖကျ ရထေသောကျ တဲ့အခြိနျ ညသနျးခေါငျလောကျ ၃ တိုကျ ရှမှေ့ာ လကျနောကျ ပဈပွီး လမျးလြှောကျ နတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈ ယောကျကို သခြောမွငျလိုကျရတယျလို့ အခိုငျအမာ ပွော ပါတယျ။
ထောငျမှူးကွီး က ကောလာဟလ သတငျး ထုတျ လှငျ့ပွီး ထောငျဆူပူမှုဖွဈအောငျ ရညျရှယျပွီး လုပျသလားဆိုတဲ့ သံသယ နဲ့ စဈဆေးပမေယျ့ တစ်ဆသေရဲ အယုံအကွညျမရှိတဲ့ ဝငျးရှကေ တိတိကကြပြွောနတေဲ့ အတှကျ သူကိုယျတိုငျယုံကွညျသှားပါတယျ။ဒီသတငျး ရုတျခညျြးပြံ့နှံ့သှား ပွီးတဲ့ နောကျမှာတော့ ထောငျ သမ်ဘာတှရေဲ့ မှတျခကျြနဲ့အတူ ဖွဈနိုငျတဲ့ ဒဏ်ဍာရီတှလေညျး ဆကျတိုကျ ထှကျပျေါ လာပါတယျ။ဒီဒဏ်ဍာရီအမြိုးမြိုးထဲက တဈ ထောငျလုံးလကျခံလိုကျတဲ့ ဇာတျ လမျးကတော့ ၃ တိုကျမှာ တှေ့ လိုကျရတဲ့အမြိုးသမီးဟာ မနှငျးဆီ (ခ) ကရငျမ ဖွဈရမယျဆိုတဲ့ ယူဆခကျြ ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဖွဈ ရပျမတိုငျခငျ ၁ ဆောငျမှာ ထူးခွား တဲ့ အဖွဈအပကျြနှဈခု ဖွဈခဲ့ပါ သေးတယျ။ ပထမအဖွဈအပကျြ ကတော့ အရေးအခငျးမှာ ပွညျသူ တှနေဲ့ ပူးပေါငျးလာတဲ့ တပျမတျောသားတှရေဲ့ သနေတျတှကေို သရကျတော ကြောငျးတိုကျအတှငျး မှာ သိမျးဆညျး ထိနျးသိမျးပေးခဲ့တဲ့ အတှကျကွောငျ့ ထောငျခုနဈနှဈ ခမြှတျခံရတဲ့ ရနျကုနျတက်ျကသိုလျ ရုက်ခဗဒေကြောငျးသား မငျးလှငျ ကွုံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။မငျးလှငျ ဟာ အငျးစိနျထောငျ ၁ ဆောငျမှာ ထိနျးသိမျးခံ ထားရတာဖွဈပွီး သူနဲ့အတူ ရုပျရှငျမငျးသားကွီး အောငျလှငျ၊ စံဇာဏီဘို၊ နောငျရိုး တငျဝငျး၊ ကြောငျးသား ခေါငျးဆောငျတှထေဲက တငျဆနျး (ရကသ)၊ ပွုံးခြို (ရကသ)၊ မငျးဇယြေ (မကသ)၊ ယဉျထှေး (လူ့ ဘောငျသဈ)၊ တငျအေး၊ BBC နမေငျး၊ ဦးတိုကျမောငျး စသဖွငျ့ ရှိကွပါတယျ။
မငျးလှငျကတော့ ၁ ဆောငျ အစှနျဆုံးအခနျးမှာ နရေပွီး အပွငျထှကျခှငျ့ မရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တံခါးနှဈထ ပျရှိပမေယျ့ တိုကျအရှကေ့ ဝငျးတံခါးကိုတော့ သော့ခတျ မထားဘဲ ဖှငျ့ပေးထားပါ တယျ။
သူ့မှာ ပဲခူးအခြုပျ ကပါလာ တဲ့ ဆေးလိပျ ထုပျပါလာပါတယျ။ ထောငျဗူးဝက မီးခွဈသိမျးထား လိုကျတယျ။
မငျးလှငျက ဆေးလိပျ အရမျးကွိုကျတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခနျးသံတိုငျကို ကိုငျပွီး တိုကျ ရှကေ့ ဖွတျသှားသမြှ ဝနျထမျး တှေ၊ ဘောကျဆငျးတှေ ဆီက ဆေးလိပျမီး တောငျးလရှေိ့တယျ။အခြို့ကလညျး သနားတော့ သူ့ကို သောကျလကျစ ဆေးပေါ့လိပျလေး တှနေဲ့ မီးပေးသှားလရှေိ့ပါ တယျ။ ဒါပမေဲ့ ခကျတာက မီးတို့ ရတဲ့ကိစ်စပဲ။အကဉျြးသားတှကေ အရေးအခငျးမှာ ထောငျကို မီးရှို့ တဲ့အတှကျ နှဈထပျဆောငျတှေ အတျောမြားမြား မီး လောငျပကျြ စီးသှားတယျ။ အဲဒီကတညျးက အကဉျြးသားတှကေို မီးခွဈ ကိုငျဆောငျခှငျ့ မပေးတော့ပါဘူး။ ဒါ ကွောငျ့ ညဘကျဆိုရငျ ကငျးစောငျ့တဲ့ဝါဒါတှဆေီက ဆေးလိပျ မီးတောငျးရလရှေိ့ပါတယျ။
တဈညမှာတော့ မငျးလှငျက ဆေးလိပျ အရမျးသောကျခငျြနေ တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျကငျးသမားမှ တိုကျရှကေို့ တျောတျောနဲ့ရောကျ မလာဘူး။
ဒီတော့ ဆေးပေါ့လိပျ အတိုကိုငျပွီး ကငျးသမားကိုမြှျော ရငျး သူတဈခကျြ အိပျငိုကျသှား တယျ။ ရုတျတရကျ သူ့အခနျးရှေ့ မှာ ခွသေံကွားတော့ အိပျခငျြမူး တူးနဲ့ လှမျးအျောလိုကျတယျ။
“ ဆရာရေ ဆေးလိပျမီးတဈ တို့လောကျ”
သူ့စကား ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ အခနျးရှကေို့ လူတဈယောကျလာ ရပျတယျ။ သံတိုငျ ကွားကနပွေီး သူ့ကို ဆေးလိပျမီး လှမျးပေးလိုကျတယျ။ သူကလညျး ဆေးလိပျသောကျ ခငျြဇောနဲ့ လူ ကို မကွညျ့မိဘဲ ဆေးလိပျမီးကို အလောတကွီး ညှိလိုကျတယျ။သူ့ဆေးလိပျကို ပွနျပေးလိုကျရော အဲဒီလူက ဘာမှမပွောဘဲ ပွနျထှကျသှား တယျ။ ဒီလူ့ရဲ့လကျက အရှညျကွီး ဆိုတာတော့ သတိ ထားမိတယျ။မငျးလှငျလညျး ဆေးလိပျမီးလေးရတုနျး အရသာ ခံပွီး အားပါးတရဖှာနတေုနျးမှာ သူ့တိုကျခနျးရှဝေ့ငျးတံခါးအဝမှာ ညတာဝနျ ကဝြနျထမျး ပျေါလာ တယျ။
“ ဟေ့ အကဉျြးသား ညဘကျ အခြိနျမတျော ဘာလို့ ဆေးလိပျ သောကျနတောလဲကှ”
သူ့စကားဆုံးတဲ့ အခါ မငျးလှငျလညျး နဝတေိမျတောငျဖွဈ သှားတယျ။ သူထငျတာက ဆေးလိပျမီးကို ည တာဝနျကြ ဝနျထမျးပဲ စတေနာဗရပှ နဲ့ လာပေးတာလို့ ထငျနတေုနျးပါ။ ဒါကွောငျ့ သူက ပွနျရှငျးပွလိုကျ တယျ။
“ ဆရာပဲ ဆေးလိပျမီးလာပေးလို့ သောကျနတောလေ”
သူ့စကား ဆုံးဆုံးခငျြး ဝနျထမျးက စိတျဆိုးမာနျဆိုးနဲ့ သံ တိုငျတံခါးဝအထိ လြှောကျလာ တယျ။
“ ဟကေ့ောငျ လြှောကျပွော မနနေဲ့။ ငါဒီတိုကျမှာ ဘယျသူ့ကို မှ ဆေးလိပျမီး မပေးသေးဘူး ကှ”
မငျးလှငျကလညျး မခံဘူး။ သူ့ကို ဆေးလိပျမီးပေးခဲ့တယျလို့ ယုံကွညျလို့ ခံပွောတယျ။
“ ခငျဗြား မပေးဘဲ ဒီမီးကို ဘယျကတို့ရမလဲဗြ”
ဒီဖွဈရပျကွောငျ့ ညတာဝနျ ကဝြနျထမျးက ထောငျမှူးကွီးဆီ ကို ထူးခွားဖွဈစဉျ အဖွဈ အစီ ရငျခံတငျပွပါ တယျ။ နောကျ တဈ နမှေ့ာ ထောငျမှူးကွီး မောငျပွုံးက တိုကျမှာ တာဝနျကတြဲ့ညဝနျထမျး တှကေို ချေါယူစဈ ဆေးပါ တယျ။ဒီလိုစဈဆေးတဲ့အခါ ဘယျသူကမှ မငျးလှငျဆီကိုသှားပွီး ဆေးလိပျမီး မပေးကွောငျး ပျေါပေါကျခဲ့ပါ တယျ။ မငျးလှငျကို စဈပွီး ဝနျထမျး တှကေို ချေါပွတဲ့အခါမှာလညျး ဆေးလိပျမီး ပေးတဲ့သူရဲ့ မကျြနှာ ကို မကွညျ့ခဲ့ တာကွောငျ့ ဘာမှ မပွောနိုငျခဲ့ပါဘူး။
ဒုတိယ အဖွဈအပကျြက တော့ ရုပျရှငျမငျးသားကွီး ဦး အောငျလှငျကိုယျတိုငျ ကွုံတှခေဲ့ ရတာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက ၁ ဆောငျမှာ ထိနျးသိမျးထားတဲ့ နိုငျငံရေးအကဉျြးသား တှထေဲမှာ ထောငျကပြွီး သားတှရေော၊ ပုဒျမ ၁၀ (က) နဲ့ ထိနျးသိမျးထား သူတှေ ရော ရှိနပေါတယျ။ဦးအောငျလှငျ ရဲ့ အခနျးထဲမှာ နောငျရိုးတငျဝငျး (မာလာ တငျဝငျး) နဲ့ ကြောငျးသား ခေါငျးဆောငျ တငျဆနျးတို့ ရှိပါ တယျ။ အဲဒီအခြိနျက ရှဈလေးလုံး တဈနှဈပွညျ့ လုပွညျ့ခငျကာလ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတိုကျမှာရှိတဲ့နိုငျငံရေး အကဉျြးသားတှဟော အတှေး အချေါအယူအဆ အားကောငျး သူတှဖွေဈပွီး တခြို့ဟာ နိုငျငံ ကြျော ပုဂ်ဂိုလျတှေ ဖွဈပါတယျ။
သူတို့ထဲက အမြားစုဟာ ထောငျ ထဲက ပါးစပျပွောဒဏ်ဍာရီတှကေို လညျး ယုံကွညျသူတှေ မဟုတျပါ ဘူး။ ဒါကွောငျ့ မငျးလှငျကို ဘယျ သူမှနျးမသိတဲ့ လူတဈယောကျက ဆေးလိပျမီး ပေးခဲ့တာကိုလညျး ဟာသလိုပဲ သဘောထားပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ညတဈညမှာတော့ သူတို့ ရဲ့ ယုတ်ျတိဗဒေတှေးချေါစဉျးစား မှုကို စိနျချေါတဲ့ ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ည သနျးခေါငျကြျော အခြိနျကွီး ၁ ဆောငျမှာ အသံနကျကွီးနဲ့ အျောသံ တဈခု ကွားလိုကျရတာက စပါ တယျ… ။
စတငျအျောတဲ့ သူကတော့ BBC ဦးနမေငျး ဖွဈပါတယျ။ ဦးနမေငျးရဲ့ အျောသံဟာ ဘေး အခနျးတှကေို ကူးစကျသှားပွီး အဲဒီအခနျးက လူတှကေလညျး ဆကျအျောပါတယျ။ ဒီလိုအျောတဲ့ အခြိနျမှာ ဦးအောငျလှငျက ပရိတျ ကွီး ၁၁ သုတျကို ရှတျနတော ဖွဈပါတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာပဲ သူ့ ဘေးမှာအိပျနတေဲ့ နောငျရိုးတငျ ဝငျး နဲ့ ကိုတငျဆနျးက ထအျော ပါတယျ။ တဈဆကျတညျးမှာပဲ နောငျရိုးတငျဝငျးက အိပျခငျြမူး တူးနဲ့ အပွငျကို လကျညှိုးထိုးပွီး “ ဝငျလာပွီ ဝငျလာပွီ ဖွူဖွူ အကောငျကွီး ဝငျလာပွီ” ဆိုပွီး အျောပါတော့တယျ။
ဦးအောငျလှငျက နှဈယောကျလုံးကို အိပျ ရာကနိုးအောငျ ညဘကျ ပရိတျ ရှတျပွီးထညျ့ထားတဲ့ ရခှေကျထဲ က ပရိတျရနေဲ့ လှမျးပကျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သူတို့က နတျပူးသလို တုနျယငျနပွေီး ပါးစပျကလညျး ဆကျအျောနကွေတယျ။ လှမျးသတိပေးလို့ မရတော့တဲ့အဆုံး ဦးအောငျလှငျက သူတို့နှဈယောကျ ရဲ့ ရငျဘတျကို လကျသီးနဲ့ထိုး လိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ပါးစပျကလညျး တဈဆကျတညျး အျောလိုကျတယျ။
“ သှားကွ မငျးတို့ထှကျသှား ကွ ငါတို့ကိုဘာမှ အန်တရာယျမပေး နဲ့”
ဦးအောငျလှငျရဲ့ လကျသီး ခကျြဒဏျ ခံလိုကျရလို့လားမသိ ဘူး။ နောငျရိုးတငျဝငျးလညျး အျောသံ တိတျ သှားတယျ။ ကိုတငျ ဆနျးလညျး သတိပွနျလညျလာ တယျ။ အဲဒီညက ၁ ဆောငျမှာ သရဲစီးတယျဆိုပွီး တိုကျဝငျး တဈခုလုံး သတငျးပြံ့နှံ့သှားတယျ။၁ ဆောငျမှာ ရှိတဲ့သူတှကေလညျး တကယျ ကွုံတှလေို့ကျရတာ ကွောငျ့ ဒီဖွဈရပျကို ဆနျ့ကငျြပွီး မှတျခကျြ ပေးတာတှေ မလုပျကွ တော့ဘူး။ ဒီအဖွဈအပကျြနဲ့ပတျ သကျပွီး နှဈပေါငျး ၃၀ နီးပါး ကွာမှ ဦးအောငျလှငျက အခုလို ပွနျပွောပွတယျ။
“ တကယျတော့ ၁ဆောငျက တိုကျဝငျးထဲမှာ အစှနျကတြယျ။ ဒီတော့ လူသှား လူလာလညျး နညျး တာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ပရလောကသား တှရေဲ့ အရိပျအယောငျ တဈခါ မှ မတှခေဲ့ရဘူး။ အဲဒီတဈညပဲ ကမ်ဘာပကျြသလို ဆူညံသှားခဲ့တာ။
နောကျတော့ ဒါဘာလို့ဖွဈ တာလဲဆိုပွီး စုံစမျးကွညျ့လိုကျ တော့ ၁၉၈၈ ခု၊ သွဂုတျလ ၂၆ ရကျနကေ့ အငျးစိနျထောငျမှာ ထောငျဆူပူမှု ဖွဈပှားတယျလို့ သိခဲ့ရတယျ။ အဲဒီဆူပူမှုမှာလညျး လူတှေ၊ ထောငျသားတှေ အတျော သခေဲ့တယျ။၁ ဆောငျမှာ ပိတျမိ နတေဲ့သူတှကေလညျး စားစရာ မရှိတော့လို့ ခှေးတှကွေောငျတှကေိုပါ သတျစားရတဲ့ အထိ ဖွဈခဲ့ကွတယျ။ နောကျတော့ ဒီလူတှေ လညျး သကေုနျကွတာပါပဲ။ ကြှနျတျော သိရသလောကျ ရှျောဖီရဲ့ အမှုတှဲတှလေောကျပဲ အသကျရှငျ ခဲ့တယျ”
ဦးအောငျလှငျရဲ့ မှတျခကျြ ကို တိုကျဝငျးမှာ နဖေူးခဲ့တဲ့ နိုငျငံ ရေးအကဉျြးသား တျောတျောမြားမြားက ငွငျးဆနျခွငျး မပွုကွပါ ဘူး။ ဒါကွောငျ့လညျး အသိရ ခကျတဲ့ ဆနျးကွယျမှုတှနေဲ့ ပွညျ့ စုံနတေဲ့ အငျးစိနျ ထောငျကွီးရဲ့ ၃ တိုကျရှကေ့ အမြိုးသမီးတဈ ယောကျ လမျးလြှောကျသှားတာ ကို မဝဖေနျကွတာဖွဈပါတယျ။ဒီဇာတျလမျးကို နိဂုံးခြုပျ လိုကျတော့ မနှငျးဆီ (ခ) ကရငျမ လို့ အားလုံးက လကျခံလိုကျတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ မကရငျမ ဟာ စိတျလိုရငျ လိုသလို ညဘကျ ရောကျရငျ ထောငျကအြကဉျြး သားတှရေဲ့အပျေါကို ခှတကျပွီး ကြီစားတတျတယျဆိုတဲ့ သတငျး စကားကလညျး ရှိနပေါတယျ။
ဒီ လိုမြိုး ညဘကျ ကရငျမရဲ့ကြီစား ခွငျးကို ခံရပွီးတဲ့သူတှဟော ရှကျ ကိုးရှကျကနျးနဲ့ မနကျရောကျရငျ ရကေနျမှာ ပုဆိုးတှလြှေျော၊ အိပျ ရာခငျး တှလြှေျောပွီး သူငယျခငျြး တှကေ မေးမွနျးတဲ့အခါ “ ညက ကရငျမ တျောတျောဆိုးတယျဗြာ” လို့ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။
ဒီလို ပွောတဲ့သူဟာ အမှနျတကယျ ညက ကရငျမနဲ့တှခေဲ့လို့ ပွော တာလား။
သူ့ဘာသာသူ အရှကျ ကို ကာကှယျဖို့ ပွောတာလား ဆို တာ ဘယျသူမှ မခှဲခွားနိုငျပါဘူး။ ထောငျထဲကို အကွောငျးအမြိုးမြိုး နဲ့ ရောကျလာတဲ့ ဆရာဝနျတှေ ကတော့ ဒီလို Ejaculation (တဈကိုယျရညျ ကာမအရသာ ပွီးမွောကျခွငျး) ဖွဈစဉျဟာ လူ တှရေဲ့ အသကျအရှယျနဲ့ ခန်ဓာဗဒေဆိုငျရာ လိုအပျခကျြ (Body Need) အရ ဖွဈတတျကွောငျးနဲ့ ထောငျထဲက သရဲမတဈယောကျ က ဒီလိုမြိုး လာကြီစားတယျဆို တာဟာ ဒဏ်ဍာရီ ပုံပွငျသဖှယျဖွဈ နကွေောငျး ပွောပါတယျ။
ဆေး ပညာ သဘောအရ အသကျ အရှယျ ငယျရှယျတဲ့ ယောကျြား လေးတဈယောကျဟာ တဈပတျကို လေးကွိမျလောကျ ကာမအာသာ ဖွဖြေောကျရနျ လိုအပျပွီး အသကျ အရှယျကွီးရငျ့သူဟာ အနညျးဆုံး တဈကွိမျ ဖွဖြေောကျဖို့ လိုအပျ တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကံ ဆိုးမိုးမှောငျကမြှုအရ ထောငျထဲ ကို ရောကျလာတဲ့ အမြိုးသားတှေ ဟာ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ ထိတှေ့ ဆကျဆံမှု မရတော့တဲ့အတှကျ ခန်ဓာဗဒေဖွဈစဉျအရ လကျဖွငျ့ ဖွဖြေောကျခွငျး (Masturbation) လုပျရငျလုပျ၊ မလုပျရငျ သူ့အလို လို သုကျလြှံခွငျးဖွဈတတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီလိုဖွဈတဲ့အခါမှာ အခနျးဖျောမိတျဆှေ သူငယျခငျြး တှကွေား အရှကျမရအောငျ ကာ ကှယျဖို့ ကရငျမ ဇာတျလမျးကို Cover Story လုပျကွတယျလို့ ဝဖေနျကွပါ တယျ။
ဒီဖွဈရပျနဲ့ ပတျသကျပွီး ၁ ဆောငျကိုရောကျနတေဲ့ စမျးခြောငျးသားတို့ အုပျစုကလညျး အရမျး စိတျဝငျစားနေ ပါတယျ။ စမျးခြောငျးသား ကိုယျတိုငျ ၅ တိုကျ ၂၂ ခနျးက ပရလောကသားတှေ နဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ လောလော လတျလတျ ဇာတျလမျးတှရှေိနေ တော့ ၃ တိုကျရှမှေ့ာ အမြိုးသမီး တဈယောကျ တှလေို့ကျရတယျ ဆိုတဲ့ ဝငျးရှရေဲ့ ကိုယျတှေ့ ဖွဈ စဉျကို သူက လုံးဝထောကျခံ လိုကျ ပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ၁ ဆောငျကို ရောကျနတေဲ့ နိုငျငံရေးအကဉျြး သားတှထေဲက ကွညျ့မွငျတိုငျသား ညီညီလှိုငျက မဖွဈနိုငျဘူး ဆိုပွီး ဇှတျငွငျးနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆရာဝနျတှပွေောသလို အရှကျ မရအောငျ ဖနျတီးထားတဲ့ လုပျ ကွံပုံပွငျတှေ ဖွဈနိုငျတယျဆိုပွီး ၁ ဆောငျ ညောငျပငျအောကျမှာ ငွငျးခုံနကွေပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ ငွငျးခုံပှဲဟာ တဖွညျးဖွညျးအရှိနျ မွငျ့လာတယျ။ နိုငျငံရေးအကဉျြး သားတှတေငျ မကတော့ဘူး။ ရိုးရိုး အကဉျြးသားတှလေညျး ပါ လာတယျ။ ရုတျရုတျ ရုတျရုတျ ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ ရငျဘတျမှာ အတနျးသုံးတနျးပါတဲ့ တံဆိပျထိုး ထားတဲ့ လူတဈယောကျ ရောကျ လာပွီး အားလုံးကိုပွောတယျ။
“ ကရငျမ တကယျရှိမရှိ ငွငျး မနကွေပါနဲ့ကှာ။ ငါက အငျးစိနျ ထောငျကို အရေးအခငျးပွီးမှ ရောကျလာတဲ့သူ မဟုတျဘူး။ အရေးအခငျး မတိုငျခငျကတညျး က ဒီထောငျမှာ အကွာကွီး နလောခဲ့တာ။ ကရငျမဆိုတာ တကယျရှိတယျ။
ဘာလို့လဲဆို တော့ ကရငျမ ယောကျြားဝငျးမွငျ့ နဲ့ ငါ အကွာကွီးနေ ခဲ့ရတာကှ။ ဝငျးမွငျ့ ထောငျက လှတျသှားပမေယျ့ ကရငျမကတော့ ဒီထောငျ ထဲမှာ မကြှတျဘဲ ကနျြနခေဲ့တယျ ဆိုတာ ငါရဲရဲကွီး ပွောရဲတယျ”
အဲဒီလိုပွောလိုကျတဲ့ သူက တော့ ၁ ဆောငျ တနျးစီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ လူလိမျဝိဇ်ဇာ ကြျောမွငျ့ ပဲဖွဈပါတယျ။….
(ဆကျလကျ ဖျောပွပေးပါမယျ …….. )
ဟင်း မကောင်း ဘူး ဆိုကာ ဆွမ်းမလောင်း ပဲ မနေပါနဲ့
ဒီစည်း ကိုကျော်ရဲ လား…?